RASMI: SSC Napoli oo qandaraaska u kordhisey Lorenzo Insigne + Sawirro – Gool FM
(Napoli) 22 Abriil 2017 – Kooxda SSC Napoli ayaa ku dhawaaqday inay qandaraaska u kordhisey garab-weerarka Lorenzo Insigne oo qandaraaskiisa la gaarsiiyay ilaa Juune 2022 isagoo fasalkii qaadan doona €5m oo euro. “Waxaan rajaynayaa inaanan marnaba siibin funaanaddan.” ayuu yiri Insigne.
Wiilkan oo ah Napolitan-ka qura ee kasoo muuqda safka 1-aad ee kooxda Napoli ayay beryo iska daba jiitamayeen maamulka kooxda, balse waxaa ugu dambayn xal laga gaarey ismari waagii iyadoo la sheegay inuu xuquuqdiisa dhanka sawirka uu siiyay kooxdiisa, iyadoo shir jaraa’id oo ay wada jir u qabteen madaxwayne Aurelio De Laurentiis lagu xaqiijiyay heshiiska.
Insigne oo bisha Juun 26 jirsan doona ayaa ka mid ah baalasha ay ku duusho kooxda Napoli isagoo fasalkan 14 gool ka dhaliyay horyaalka Talyanaiga, halka uu dhigay 7 gool, halka uu 16 gool dhaliyay, 10 goolna dhigay tartamada oo idil 34 kulan oo uu saftay.
GOOGOOSKA: Chelsea vs Tottenham Hotspur 4-2 (Chelsea oo Spurs ku joogsatey)